रीमा विश्वकर्माले किन गरिन् सम्बन्ध बिच्छेद ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२४ मंसिर २०७४, आईतवार १२:३४
काठमाण्डौ मंसिर २४   ■
अभिनेत्री रीमा विश्वकर्माले विवाहको दुई वर्षमा सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी छिन् । दुई वर्ष अगाडि काठमाण्डौको होटेल हायातमा भव्य रुपमा बेलायतमा बस्दै आएका धरानका रोबर्ट विश्वकर्मासँग विवाह गरेकी रीमाले सम्बन्ध बिच्छेदको कुरालाई गोप्य राखेकी थिईन् । तर दुई साता अघि कानुनी रुपमै अलग भएकी रीमाको सम्बन्ध बिच्छेदको कुरा उनका पूर्व पति रोबर्टको ईन्गेजमेन्टले बाहिर ल्याएको छ । रीमासँग कानुनी रुपमा अलग भएपछि रोबर्टले मोडल वर्षा रसाईलीसँग शुक्रबार ईन्गेजमेन्ट गरेका छन् । उनीहरुको विवाहको मिति भने तय भएको छैन ।
तर रीमा भने यी सबै कुरामा मौन छिन् । विवाह अघि पनि रीमाले रोबर्टसँगको सम्बन्धलाई धेरै पछि सार्वजनिक गरेकी थिईन् । विवाह पछि रीमा नेपालमा रहेर कलाकारितामै सक्रिय थिईन् भने रोबर्ट बेलायतमै थिए । विवाह पछि रीमा केही पटक रोबर्टलाई भेट्न बेलायत पनि पुगिन् । उनीहरु एकअर्कासँग विशेष समय बिताउँथे । तर पछिल्लो केही समय यता भने उनीहरुको भेटघाट हुन छाडेको बुझिन्छ । रीमा नेपाल आईडलमा व्यस्त भएपछि उनीहरुको सम्बन्धमा दरार आएको आशंका छ ।
केही समय अघि देखि रीमाले आफ्ना केही निकट साथीहरुलाई भने आफूले रोबर्टसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न लागेको कुरा बताउँदै आएकी थिईन् । अन्ततः उनले सम्बन्ध बिच्छेद गरिन् पनि ।
यसरी भएको थियो रीमा र रोबर्टको विहे
रीमा र रोबर्टको भेट सामाजिक सञ्जालले गराएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा समसामयिक र राजनीतिक कुराका बारेमा आफ्नो धारण पोस्ट गरिरहने रीमालाई यस्तै पोस्टले रोबर्टसँग नजिक बनाएको थियो । रीमाको पोस्टमा प्रतिकृया जनाउँदै रोबर्टले एकपटक म्यासेज पठाएका थिए । अरु कसैको प्रतिकृयाको जवाफ नफर्काउने रीमाले पनि रोबर्टको प्रतिकृयाको जवाफ फर्काएकी थिईन् । तर उनीहरुबीच त्यो भन्दा अरु कुरा भएको थिएन । पछि एक पटक रीमाले रोबर्टलाई त्रिभुवन बिमानस्थलमा देखिन् । तर उनीहरुको बोलचाल भने भएन । पछि उनीहरुको फेसबुकमै कुराकानी हुन थाल्यो । तर उनीहरुबीच माया प्रेमका कुरा हुँदैनथे । देशका कुराहरु हुन्थे । यसै क्रममा एकपटक रोबर्ट नेपाल आएको बेला रीमालाई भेट्ने प्रस्ताव राखे । रीमाले पनि उनको प्रस्तावलाई अस्विकार गरिनन् । पहिलो उनीहरुले दरबारमार्गको एक कफी सपमा भेटे । त्यहाँ उनीहरुको लामो कुराकानी भयो । कुरा मिल्ने साथी बनिसकेका उनीहरुले साथीकै रुपमा एकअर्काको परिवारलाई पनि भेटाए । परिवारको भेटघाट पछि उनीहरु भन्दा अगाडि नै उनीहरुको परिवारले उनीहरुको विवाह गराउने योजना बनायो ।
परिवारले योजना बनाएपछि उनीहरुले पनि एकअर्कालाई जीवन साथी बनाउने निर्णय लिएका थिए । रोबर्टसँग विवाह गर्दा रीमाले आफूले सपना देखेको जसरी नै विवाह गर्न सकेकोमा खुशी लागेको मिडियालाई बताएकी थिईन् । रीमाले रोबर्टको बारेमा कुरा गर्दै रोबर्ट बचनको पक्का भएका कारण यहि कुराले आकर्षण गरेको बताउदै आएकी थिईन् । तर यस पटक रोबर्टले कुन बचन पूरा गर्न सकेनन् र उनीहरुको सम्बन्ध बिच्छेद भयो त्यसको आधिकारिक जानकारी आईसकेको छैन । यी दुईको सम्बन्ध बिच्छेद सहमतीमै भएको भएपनि के कारणले भयो ? त्यो भने रहस्य बनेर रहेको छ ।